Foko sy Fiaviana · Jolay, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Foko sy Fiaviana · Jolay, 2011
Tantara mikasika ny Foko sy Fiaviana tamin'ny Jolay, 2011
Serbia: Fanehoan-kevitra Voalohany Momba Ny Fanafahana Madiodio An'i Sandor Kepiro
Eoropa Afovoany & Atsinanana 27 Jolay 2011
Ny Alatsinainy 18 Jolay 2011, nafahan'ny fitsarana iray ao Bodapesta i Sandor Kepiro, kapitenin'ny polisy Hôngroa tamin'ny ady lehibe faharoa izay nanao raharaha miaramila tany Serbia teo ambany fibodoana sy, izay tsy voa ela akory, “anisan'ny Nazy nokarohina fatratra.” Nampangaina ho nanao heloka bevava tamin'ireo Serba, Jiosy ary Romana nandritra ny Novi Sad izy - fandripahana nataon'i Hôngroa ny volana Janoary 1942.
Aynur Doğan, mpanankato Kiorda-Tiorka, no nohorakorahan'ny ampahany tamin'ireo mpijery nandritra ilay fampisehoana ankalamanjana Istanbul Jazz Festival satria nanao hira tamin'ny teny Kiorda izy. Niredona ny hiram-pirenena Tiorka ny sasany tamin'ireo mpijery ho fanoherana ny zava-miseho, raha toa ka nanohana ilay mpihira kosa ny mpijery hafa. Nony farany dia niala teo ambonin'ny lampihazo...
Bolivia: Mpiady Mpiangaly Cholitas Eny Alohan'ny Sehatra
Amerika Latina 18 Jolay 2011
Nahasarika ny sain'ny teratany sy ny mpitsidika efa ho am-polotaonany izao ny tolom-behivavy (catch) ao El Alto, Bolivia. Nampian'ireto vehivavy ireto zavatra kely avy amin'ny nentin-drazan-dry zareo ity lalao malaza ity: taiza koa no nahitanao zipo lava mirenty miaraka amin'ny atin'akanjo, fehin-tenda misy volombolony, volo matevina sy satroka bozaka entina miady eny ambony ringa?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 18 Jolay 2011
Betsaka amin'ireo kolontsaina no mampiaraka ny sakafony amin-javatra vita avy amin'ny voamaina; mofo, biskoitra sy karaza-mofo nahandroina tamin'ny entona no tena isan'ny sakafon'ny olna amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao. Androany isika dia hitsidika mpiangaly sy mpahandro mba hijery ny fomba fikarakaran-dry zareo sy fanaovany ny sakafo fanomeny ny fianakaviany.